बुध ग्रहले घर परिवर्तन गर्दैछ, यी राशि भएका व्यक्तिलाई मिल्नेछ यस्तो फल !! - IAUA
बुध ग्रहले घर परिवर्तन गर्दैछ, यी राशि भएका व्यक्तिलाई मिल्नेछ यस्तो फल !!
ramkrishna October 8, 2017	बुध ग्रहले घर परिवर्तन गर्दैछयी राशि भएका व्यक्तिलाई मिल्नेछ यस्तो फल !!
बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दा मेष राशि भएका व्यक्तिलाई धेरै फाइदा हुने देखिन्छ । विवाहको योग बन्ने छ भने नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ । साथै वैवाहिक जीवनमा पार्टनरको धेरै सहयोग प्राप्त हुनेछ भने आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार आउने छ ।
बुध ग्रहले कन्या राशिमा प्रवेश गर्दा वृष राशि भएका व्यक्तिका लागि भने असुभ हुन सक्छ । फजुल खर्च बढ्नेछ भने महंगा वस्तुमा खर्च बढ्ने छ । यस्तै वृष राशि भएका महिला आफ्नो मेकअपमा धेरै खर्च गर्नेछन् ।
मिथुन राशि भएका व्यक्तिका लागि पनि बुध ग्रहको घर परिवर्तन असुभ रहने छ । मिथुन राशि भएका व्यक्तिलाई मानसिक तनाव बढ्ने छ भने काममा मन लाग्ने छैन ।
कर्कट राशि भएका व्यक्तिको जीवनमा केही ठूलो र महत्वपूर्ण परिवर्तन हुन सक्छ । यो वदलाव सुरुवातमा त्यति राम्रो त हुने छैन । तर विस्तारै यसले तपाईलाई फाइदा पुग्ने छ ।
बुध ग्रहको गोचरले सिंह राशि भएका व्यक्तिलाई भने केही सफलता मिल्ने छ । काममा सफलता मिल्ने छ भने सोचेका कार्यहरु पनि पूरा हुनेछन् ।
बुध राशिको घर पतिर्वन गरेर कन्या राशिमा नै आउने भएकाले यो राशि व्यक्तिका लागि भने अत्यन्तै शुभ रहने छ । तपाईको धर्म भावमा बुधको उपस्थिति रहने छ । भगवान विष्णुको उपासना गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
बुध ग्रहको राशि परिवर्तनले तुला राशि भएका व्यक्तिलाई त्यति राम्रो हुने छैन । साना साना समस्याका कारण तनाव थपिने छ ।
बुध ग्रहको गोचर वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिलाई राम्रो रहने छ । साथीहरुबाट पूरा सहयोग मिल्ने छ । तर मानसिक रुपमा भने केही तनाव बढ्ने सम्भावना छ ।
बुधले घर परिवर्तन गर्दा धनु राशि भएका व्यक्तिलाई भने केही नराम्रो हुने देखिन्छ । प्राय प्रयासहरुमा सफलता मिल्ने छ भने शुरु गरिएका काम पनि पूर्ण हुने छैनन् ।
मकर राशि भएका व्यक्तिको नीजि जिन्दगी केही प्रभावित हुन सक्छ । सन्तानसँग केही तनाव आउन सक्छ ।
बुध ग्रहको राशि परिवर्तन कुम्भ राशि भएका व्यक्तिका लागि पनि अशुभ संकेत ल्याएर आएको छ । काममा सफलता प्राप्त हुने छैन भने घर–परिवार र नीजि जीवनमा पनि समस्या थपिने छन् ।
मीन राशि भएका व्यक्तिलाई भने बुधको राशि परिवर्तन न त धेरै फाइदाजनक हुने छ न त धेरै नराम्रो हुने छ । तर यस दौरान यो राशि भएका व्यक्ति आफ्नो व्यवहारमा नम्रता ल्याउनु जरुरी छ । किनकी व्यवहारकै कारण कसैसँग झगडा पर्न सक्छ ।
Previous Previous post: मेलम्चीको पानी चैतमा ल्याउने आयोजनाको दाबी
Next Next post: यी ४ राशिका व्यक्तिले कहिले पनि अरुलाई धोका दिँदैनन् !!